Otu esi etinye & hazie Git na Linux Mint 20 - LinuxCapable
Monday, October 25, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Git na Onye njikwa ngwugwu APT
Wụnye Git site na PPA
Mepụta & Wụnye Git site na Isi Iyi
N'ime nkuzi na-esonụ, ị ga-amụta ka esi etinye Git na Linux Mint na ụzọ dị iche iche.
Git dị na ebe nchekwa Linux Mint (Ubuntu) ndabara, arụnyere na iji njikwa ngwugwu APT. Iji mee nke a, jiri iwu a:
Ngwọta ọzọ maka ndị ọrụ na-achọ ụdị ọhụrụ ka ha na-eji njikwa ngwugwu APT bụ ịwụnye Git PPA dị ka ndị a.
Na-esote, melite ndepụta nchekwa APT gị iji gosipụta PPA ọhụrụ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị tinyelarị ya, ị ga-ahụ ọkwa iji kwalite ngwugwu.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị tinyebeghị Git, jiri iwu na-esonụ iji wụnye Git.
Ugbu a, nyochaa ụdị ewuru ụdị Git sitere na PPA.
Ọdịiche dị n'etiti PPA na ebe nchekwa APT ndabara dị ịrịba ama, yana nri ndabara na-ewu 2.25.1 yana PPA nwere 2.33.1. A na-atụkarị aro PPA maka iji ụdị GIT ọhụrụ, nke ị nwere ike ịdọrọ mmelite ọ bụla n'ọdịnihu n'ụzọ dị mfe. Agbanyeghị, ịnwe ihe kachasị ọhụrụ gụnyere iji aka na-achịkọta Git site na isi mmalite oge ọ bụla ọ na-emelite.
Nkuzi a ekpuchila otu esi etinye nkwụsi ike ma ọ bụ akwụghị ụgwọ site na iji njikwa ngwugwu APT. Agbanyeghị, maka ndị chọrọ ụdị Git kacha ọhụrụ, a na-atụ aro ka ịwụnye ya mgbe niile site na isi mmalite.
Ụdị Y, wee pịa Tinye igodo aga n'ihu.
Ozugbo etinyere ihe ndabere, gaa na akwukwọ ntọhapụ ịchọta ebe nchekwa zip zip ma ọ bụ ntọhapụ kacha ọhụrụ sitere na Git.
N'oge edere ntuziaka, 3.3.1 bụ ntọhapụ kwụsiri ike kachasị ọhụrụ.
jiri wget iwu dị ka n'okpuru:
Nzọụkwụ mbụ bụ ịnye aha gị nke a ga-ahazi n'ụwa niile:
Ọ bụrụ na ị ga-ejirịrị onye inyeaka nzere, a na-adụ ọdụ ka ị chekwaa naanị obere oge maka nchekwa dị ukwuu. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-eji Git arụ ọrụ taa maka awa 1 ruo 4 mana ị gaghị emetụ ya aka ma eleghị anya izu ole na ole, wee tọọ njedebe maka awa 5:
Categories Mint Linux Tags GIT, Mint 20 Mint Linux Mail igodo